किन चाहिन्छ क्याल्सियम ? शरीरका लागि आवश्यक क्याल्सियम कसरी प्राप्त गर्ने ? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
आवश्यक मात्रामा क्याल्सियमको मात्रा नपुगेमा मानव शरीरमा त्यसका विभिन्न असर देखापर्न सक्छन् । आवश्यक मात्रामा क्याल्सियम नभएमा मानव शरीरमा हड्डीसम्बन्धी विभिन्न रोग देखापर्ने गर्छन् । हाडजोर्नीलाई मजबुत बनाउन तथा मुटु स्वस्थ राख्नसमेत मानव शरीरमा क्याल्सियमको आवश्यकता हुन्छ ।
क्याल्सियमको कमी भएमा हड्डीको मजबुतीमा समस्या पैदा हुन सक्छ, मुटु सञ्चालनमा समस्या आउन सक्छ । यसका साथै क्याल्सियमको कमीले सम्पूर्ण मानसिक विकासमा समस्या आउन सक्छ ।
शरीरको सम्पूर्ण चक्र सन्तुलित राख्न मानव शरीरमा क्याल्सियम आवश्यक छ । शरीरमा आवश्यक मात्रामा क्याल्सियम भएन भने स्मरणशक्तिमा समेत ह्रास आउन सक्छ । दूध, सागपात, गेडागुडी, माछामासुलगायत खानेकुरामा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम पाउन सकिन्छ ।
क्याल्सियमको कमी भएमा हड्डीको मजबुतीमा समस्या पैदा हुन सक्छ, मुटु सञ्चालनमा समस्या आउन सक्छ । यसका साथै क्याल्सियमको कमीले सम्पूर्ण मानसिक विकासमा समस्या आउन सक्छ । मानिसले उमेरअनुसार फरक–फरक मात्रामा खानेकुरा खाएझैँ क्याल्सियम प्राप्तिमा पनि फरकपन पाउन सकिन्छ । मानिसले खाने स्वस्थकर खानाअनुसार नै उनीहरूले पाउने क्याल्सियमको मात्रा फरक पर्छ ।
क्याल्सियमको कमीले मानिसलाई रिकेट्स, ओस्टेमालासिया नामक रोगसमेत लाग्न सक्छ । भिटामिन डी तथा क्याल्सियमको कमी भएमा रिकेट्स रोग लाग्ने गर्छ । गर्भवती महिलालाई प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियमको आवश्यकता पर्छ ।
प्राकृतिक संरचनाअनुसार पुरुषको तुलनामा महिलालाई क्याल्सियमको मात्रा बढी आवश्यक पर्छ । महिलाहरू महिनावारी हुँदा तथा गर्भावस्थामा समेत शारीरिक रूपमा कमजोर हुने भएकाले पुरुषको तुलनामा बढी क्याल्सियमको आवश्यकता पर्न गएको हो ।
भिटामिन डी र क्याल्सियमको एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । त्यसैले भिटामिन डी र क्याल्सियम सँगसँगै हुनु आवश्यक छ । क्याल्सियमको मात्रा कम भएमा सानो छँदा बच्चाको वृद्धि विकास कम हुने गर्छ । बच्चा त्यति सक्रिय नदेखिने, सानोतिनो चोटपटकका कारण पनि फ्याक्चरको समस्या आउनेलगायत समस्या देखापर्छन् ।
ठूलो भएपछि क्याल्सियमको मात्रा कम भएका ओस्टेमालासिया नामक रोग देखापर्ने गर्छ । साथै, क्याल्सियमको मात्रा शरीरमा कम भएका मानिसमा समकक्षीको तुलनामा छोटो समयमै थकित हुनेजस्ता समस्या देखापर्छन् । शारीरिक अस्वस्थताका कारण स्मरणशक्तिमा समेत कमी आउँछ । कतिपय बच्चामा क्याल्सियमको कमीले छारेरोगको समस्या पनि देखापर्न सक्छ ।
प्राकृतिक संरचनाअनुसार पुरुषको तुलनामा महिलालाई क्याल्सियमको मात्रा बढी आवश्यक पर्छ । महिलाहरू महिनावारी हुँदा तथा गर्भावस्थामा समेत शारीरिक रूपमा कमजोर हुने भएकाले पुरुषको तुलनामा बढी क्याल्सियमको आवश्यकता पर्न गएको हो । त्यसैगरी शारीरिक रूपमा बढी मिहिनेत गर्ने मानिसलाई कम परिश्रम गर्नेको तुलनामा बढी क्याल्सियम आवश्यक हुन्छ । साथै, महिनावारी रोकिएका महिलालाई अन्यको तुलनामा बढी क्याल्सियम आवश्यक हुन्छ ।
खानाको प्रकृतिअनुसार मानव शरीरमा क्याल्सियमको आपूर्ति निर्धारण हुने गर्छ । तयारी खाना खाने मानिसको तुलनामा घरको खाना खानेले बढी मात्रामा क्याल्सियम पाउन सक्छन् । खाना खाने शैलीमा पनि क्याल्सियमको आपूर्ति निर्भर हुन्छ ।
गाउँघरमा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध खानेकुरालाई नै मिलाएर खान सकेको अवस्थामा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम पाउन सकिन्छ । घरबाहिर पनि मैदाबाट बनेको खानेकुरा खानुभन्दा दूध तथा क्याल्सियम पाइने खानेकुरा खाएमा क्याल्सियम पाउन सकिन्छ ।
नेपालमा अझै पनि मानिसको खाना खाने परिपाटीमा परिवर्तन नआएकाले क्याल्सियमका कारण लाग्ने रोग अझै पनि देखापरि नै रहेका छन् । वयष्कमा भन्दा पनि खासगरी बालबालिकामा क्याल्सियमको कमीले लाग्ने रोग बढी देखिएका छन् ।
कति चाहिन्छ मानिसलाई दैनिक क्याल्सियम?
हाम्रो शरीरमा पाइनेमध्ये अधिकांश क्याल्सियम हड्डीमा पाइन्छ । यसले हड्डी मजबूत पार्छ । क्याल्सियमकै कारण मुटु, मांसपेशी, रगत तथा स्नायुकोषहरुले पनि शरीरमा स्वस्थ रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् । यदि हामीले शरीरलाई चाहिने आवश्यक क्याल्सियम उपभोग गरिएन भने शरीरले हड्डीबाट क्याल्सियम लिई रक्तसन्चारप्रणालीमा पठाउँछ । यसले हड्डी कमजोर भई ओष्टियोपोरोसिस रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
किशोर – ५० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला तथा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका पुरुष – १३ सय मिलिग्राम दैनिक
दूध : क्याल्सियम पाइने मुख्य पदार्थ दूध हो । विशेषगरी गाइको दूधमा बढी क्याल्सियम पाइन्छ । चिल्लोरहित दुधले मानिसलाई आवश्यक पर्ने ३० प्रतिशत क्याल्सियम दुधले पूर्ति गर्छ ।
दहि : दहि दुधभन्दा पनि सजिलै पच्छ । २२५ग्राम दुधमा भन्दा त्यतिनै मात्राको दहीमा बढी क्याल्सियम पाइन्छ । सादा दहीमा प्रोटिन पनि हुन्छ ।
१. तरकारी तथा हरिया सागसब्जी
२. फलफूल तथा बदाम
३. सामुद्रिक खाद्यपदार्थ
५. सोय तथा सोयजन्य उत्पादन
ध्यानाकर्षण : हल्का पेय पदार्थ, क्याफिन र अल्कोहलले क्याल्सियमलाई हानी गर्छन् । त्यसैले यी चिजबाट टाढै बस्नुहोस् ।
शरीरमा क्याल्सियम कमी हुँदा देखिन्छन् यस्ता लक्षण
कडा र स्वस्थ हड्डी बनाउन क्याल्सियमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हरिया सागसब्जी, दूध, दही, बदाम, चिज लगायतका खानेकुराबाट हामीले क्याल्सियम पाउँछौँ। बढ्दो उमेरका किशोर–किशोरीलाई क्याल्सियमको बढी आवश्यकता पर्छ। तर, क्याल्सियम पाउने खानेकुरामा ध्यान नदिँदा विशेषगरी १४ देखि २० वर्ष उमेरका किशोर–किशोरीमा विभिन्न समस्यामा देखिने गर्छ। शरीरमा क्यल्सियमको अभावका केही लक्षण यस्ता छन्ः
शरीरमा पर्याप्त मात्रमा हेमोग्लोबिन हुँदा र प्रशस्त पानी खाँदा पनि बारम्बार मांशपेशी दुख्ने समस्या छ भने शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा कम भएको बुझ्नुपर्छ। तिघ्रा र पाखुराको मांशपेशी नचल्नु न्यून क्याल्सियमको संंकेत हो। तसर्थ शरीर बारम्बार दुख्छ भने क्याल्सियमको अभाव हुन सक्ने भएकाले तत्कालै चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ।
हड्डी कसिलो नहुनु
कहिलेकाहीँ कुनै हड्डी (विशेषगरी घुँडा र कुइनोको तल्लो हड्डी) हल्लिने तथा घुम्ने गर्छ। यो क्याल्सियमको अभावले हुन सक्छ। मानिस बृद्ध भए पनि हड्डीलाई बलियो बनाउन क्याल्सियमको आवश्यकता पर्छ। शरीरको धातुलाई खनिज पर्दाथमा परिवर्तन गर्नका लागि क्याल्सियमको भूमिका हुन्छ। तसर्थ, न्यून क्याल्सियमले हड्डी र मासुलाई एकअर्कामा कसिलो बनाउने प्रक्रियामा असर पुग्छ। यस्तोमा हड्डीका तन्तुहरु नास हुनुका साथै हड्डी भाँचिन सक्छ।
नङ भाँचिनुरकमजोर हुनु
हड्डीलाई जस्तै नङलाई बलियो बनाउन पनि क्याल्सियम चाहिन्छ। क्याल्सियमको अभावमा नङ अत्यधिक कमजोर भई भाँच्चिन थाल्छ। नङ निकै कमजोर वा बारम्बार आफैँ भाँचिन्छ भने शरीरमा क्यल्सियमको आवश्यकता छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
शरीरमा रहेको क्याल्सियममध्ये ९९ प्रतिशत क्याल्सियम दाँत र हड्डीमा हुन्छ। क्याल्सियम तह न्यून भएमा दाँत दुख्ने, किराले खाने हुन्छ। दाँत दुख्नुको अतिरिक्त दाँतको इनामेल हराउनु, दाँत वरपरका हड्डी कुहिनु र गिजासम्बन्धी अन्य रोग लाग्नु (पेरिडोन्टल डिजिज) क्याल्सियम अभावका लक्षण हुन्। दाँत सिरिङ्ग हुने वा सबै बंगारा एकैपटक दुख्ने लगायतका समस्या पनि क्याल्सियमकै अभावले हुन सक्छ। यस्तो लक्षण देखिएमा क्याल्सियमयुक्त खानेकुरा प्रसस्त खानुपर्छ। त्यस्तै बालबालिकामा समयमै दाँत नपलाउने, पलाएका पनि निकै कमजोर हुने लक्षण देखिए क्याल्सियमको अभाव भनेर बुझ्न सकिन्छ।
महिनावारी भएको समयमा अत्यधिक शरीर तथा मांशपेशी दुख्छ भने त्यो क्याल्सियमको अभाव लक्षण हुन सक्छ। कुन क्याल्सियम दिँदा यस्तो पीडा रोक्न सकिन्छ भन्नेबारे मेडिकल साइन्समा अझै स्पष्ट भने भएको छैन। अनिमिति रुपमा महिनाबारी र अत्यधिक रक्तस्राब हुनु पनि क्याल्सियम कमीको लक्षणभित्र पर्दछ। भ्रुण रहने स्थानको सामान्य विकास र अण्डाशयको हर्मनको नियमित विकासका लागि पनि क्याल्सियम नभई नहुने खनिज पदार्थ हो।
बारम्बार भाइरस र ब्याक्टेरियाजन्य रोगले समात्नु
शरीरलाई स्वस्थ राख्न र रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीका लागि पनि क्याल्सियम चाहिन्छ। बारम्बार स्वासप्रस्वाससँग सम्बन्धी समस्या आउनु र आन्द्रामा संक्रमण देखिनु पनि क्याल्सियमकै अभावले हुन सक्छ। क्याल्सियमको अभाव हुने मानिसलाई भाइरस, ब्याक्टेरिया र अन्य परिजीवीले चाँडै आक्रमण गर्छ। तसर्थ, बारम्बार भाइरस, ब्याक्टेरियाजन्य रोगको संक्रमणबाट पीडित हुनेले क्याल्सियमको अभाव हो कि भनेर चासो दिनुपर्छ।
हड्डी र मांशपेशीको पीडाले क्याल्सियम अभाव भएका मानिसलाई सामान्यतया कमजोर बनाउँछ। डर, त्रास, पीडा जस्ता मानसिक कमजोरी र मानसिक अस्वस्थता पनि क्याल्सिमयसँग सम्बन्धित छ। क्याल्सियमको अभावमा यस्ता समस्या आउन सक्छन्। अनुहार पहेँलो र थकित देखिनु तथा जतिखेर पनि अल्छी महसुस हुनुको कारण पनि क्याल्सियम अभाव हुन सक्छ।
बच्चा जन्मिएपछि महिलामा क्याल्सियमको अभाव हुने गर्छ, जसका कारण उनीहरुले कमजोर र थकित महसुस गर्छन्। क्याल्सिमयकै अभावमा सुत्केरी महिलाको दूध नआउने, एकाग्र भएर सोच्न नसक्ने र अत्यधिक थकित समसुस हुने गर्छन्। गर्भवती महिलालाई एक सय देखि एक सय २० एमजी क्याल्सियम दैनिक खुवाउनुपर्छ।
Don't Miss it आलुको बोक्रा ताछेर खाने गर्नुहुन्छ ? बोक्रा नताछी खानुका यस्ता छन् फाईदा – जान्नुहोस्
Up Next धेरै नखानुहोस् यस्ता प्रकारका खाना, नभए चाँडै नै खुइलिन्छ तालु